Shabeellaha Dhexe: Biriq sababtay dhimasho & dhaawac – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jowhar – Mareeg.com: Wararka ka imaanaya tuulada Biyo-cade oo hoostimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ilaa saddex ruux ku geeriyoodeen ilaa lix kalana ay ku dhaawacmeen biriq ama danab ku dhacday gurri ku yaalla halkaas, kaasoo ay roob da’ayey uga okoranayeen dhowr qof.
Dadka ku dhaawacmay biriqdaan ayaa la sheegay ineysan si deg deg ah u helin gargaar caafimaad maadaama tuuladu aysan laheyn goob caafimaad oo wax u qaban karta.
Macallin Abuukar Muuse Mataan oo dadka deegaanka ka tirsan ayaa sheegay in dadka dhaawaca ah la geeyay goob yar oo caafimaad, taasoo ku taalla Biyo-cadde.
Tuulada Biya-cadde ayaa ka mid ah deegaanada la isku yiraahdo Afarta Tuulo, waxeyna 40-km dhinaca bari ka xigtaa magaalada Jowhar.